Qorayaasha | RayHaber | raillynews
In si cad loo sheego… Intii lagu jiray booqashada ku-xigeenka AK Party Bursa Ahmet Kılıç laba toddobaad ka hor, TCDD Taşımacılık A.Ş. Maareeyaha guud iyo gudoomiyaha guddiga Kamuran Yazıcı ayaa danaynayay xukunka. Wuxuu yiri: “Warshadaha jira [More ...]
Maxaa Tareenka loo aado Bursa; Toddobaadkii la soo dhaafay,… Guddiga Miisaaniyadda Qorsheynta ee Golaha Qaranka Qaranka Turkiga ayaa ka wada hadlayey miisaaniyadda Wasaaradda Gaadiidka. Kuxigeenka iyo kuxigeenka gudoomiyaha GOOD Party Bursa wuxuu ahaa Prof.Dr. Dr. İsmail Tatlıoğlu wuxuu si furan u weydiiyay wasiir ku xigeenka 2: yapılan Made in Bursa [More ...]
Waxaan fahamsanahay in siyaasiyiinta iyo badhasaabka 'Çanakkale iyo Balıkesir', ee iskuxira rajada ay ka qabaan tareenka tareenka in ay maraan Istanbul ama Ankara iyo badhasaabyada Ankara, ay saameyn ku yeesheen, khadkii Bandırma ee la wareejiyayna dib loogu dhigay ajandaha maalgashiga. … Halkan, sidoo kale, hadafka wax soo saarka warshadaha ee gobolka Central Anatolia si loo gaaro dekada tareenka ayaa la dareemayaa, laakiin Bursa [More ...]
Mashruuca tareenka xawaaraha sare ee Bursa waxaa lagu fulin doonaa amaah dibadeed; Rinjiyeynta ayaa hadda loo yaqaanaa var Waxaa jira laba marxaladood qadka tareenka Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hawlaha kaabayaasha ee wejigii koowaad ee khadka Bursa-Yenişehir wuxuu kusii dhowaaday boqolkiiba 70. Dhowr qodob oo shaqo ayaa la arki karaa, laakiin waa horumar daran [More ...]
Dunida Ganacsi waxay u dhaqaaqeysaa Khadka Xawaaraha Sare ee Bursa; Xaqiiqdii,… Balkantürksiad Madaxweynaha Berat Tunakan wuxuu diyaariyey barnaamij Ankara ah oo uu ku booqanayo xildhibaanada Bursa isaga iyo maamulkiisaba. Si kastaba ha noqotee, ken Markii aan aaday Ankara si aan ula kulmo siyaasiyiinta, "dhibaatooyinka iyo rajada Bursa" [More ...]
Qolka hufan ee loogu talagalay Rakaabku inay ku sugnaadaan Qabow! ; Waxaa laga yaabaa in arasında Ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan ee arrimaha siyaasadeed iyo dhaqaalaha ee ajandaha, waxaa loo arki karaa inay tahay shaqo af-kor u qaadidda dadka qaar ah. Laakiin… Xilligii xagaaga waxaan ka tagnay, maalin walba 300 waxay qaadi jirtay kun rakaab ah [More ...]
Magaalooyinka sii kordhaya ... Intaa waxaa dheer, magaalooyinka sida Bursa, oo si dhakhso ah ugu kobcaya hab aan caadi ahayn oo aan la xakamayn, dhibaatada gaadiidku waa wax aan caadi ahayn nolol maalmeedka. Sida xaqiiqda dhabta ah, ... Bursa, wadooyin cusub iyo buundooyin cusub ayaa la dhisay waxaana jira waddooyin hore loo ballaariyay, laakiin [More ...]
Mashruuca Tareenka Sare ee Bursa
Waan ognahay in  Marka maalgelinta miisaaniyada weyni ay rabto magaalooyinka iyo codsigan la soo bandhigo, waxay timaadaa ajandaha. Inkasta oo Bursa ay ka wada hadleen sidii aynu ku guuleysan lahayn magaalada, laakiin Bursa waa mid aad u wanaagsan [More ...]